Nepal : Hetsipanoherana bobaka be · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Aogositra 2018 12:55 GMT
Tamin'ny herinandro lasa, nikarakara hetsipanoherana ireo Tibetàna mpialokaloka ao Nepal mba hanoherany ny governemanta shinoa, ho fankalazana ny faha-50 taonan'ny fitroarana tao Tibet. Vahiny telo, Holandey iray, Britanika iray sy Norveziàna iray no nosamborina nandritra ilay fihetsiketsehana. Na nanohana hatry ny ela ny maha-tokana an'i Shina aza i Nepal, nandoto ny sarin'ilay firenena ny fisian'ireo hetsipanoherana matetika ataon'ireo mpialokaloka sy ny fahitàna ireo fifandonana amin'ny mpanao fihetsiketsehana aseho eny anatin'ireo mpampahalala vaovao iraisampirenena.
Sary Mafate 69 nampiasàna lisansa creative commons. Fihetsiketsehan'ireo Tibetàna teo anoloan'ny masoivohon'i Shina tamin'ny 12 oktobra 2008.
Red Room no mametraka ety anaty tambajotra [angl] ny antsafa nifanaovana taminà tibetàna iray mpitsoa-ponenana, notontosain'i Andrew Q Lam. Omen'io antsafa io ny fomba fijerin'ireo mpitsoa-ponenana ny fiainan-dry zareo ao Nepal sy ny fihetsehampon'izy ireo momba an'i Tibet, izay nanapaka ny fifanasàna vangy nahazatra nifanaovan'i Shina sy ireo izay manohana ny tolon'ireo Tibetàna.
«Tamin'ny 1961, mbola vao valo taona aho tamin'izany, nandositra nankaty Nepal izahay rehefa noroahan'ireo Shinoa hiala ny tranonay. Tian-dry zareo izahay mba hianatra ho lasa kaominista mahafatrapo, ary nosamboriny daholo ireo lamas tao aminay, noho izany tsy afaka intsony ny hijanona izahay.
Niaraka tamin'ny fianakavianay, nisy 14 izahay, ary nandritra ny taona telo voalohany, niaina toy ny biby – niankina tanteraka tamin'ireo fikambanana mpanao asa soa iraisampirenena mba hanome hanina anay. Saingy taty aoriana, nianatra nanenona karipetra izaho sy ireo anabaviko, ary nanomboka niantoka ny fiainanay sy ny an'ireo fianakavianay.
Aty Népal, tsy manana zompirenena izahay. Efa ho 40 taona aty aoriana, tsy mbola afaka manana zo ho tomponà tany. Azonay atao fotsiny ny manofa na miaina any amin'ny toby tibetàna.
Amin'izao fotoana, manana ny toerampivarotana rakitry ny ela ahy aho, saingy tsy hety ho lasa tompon'izy io mihitsy.»
Nidina an-dalambe koa iIreo Tharus, vondrona vitsy an'isa any amin'ny lemaka atsimon'i Nepal, efa ho roa herinandro izao, mba hitaky ny tsy hanasokajiana azy ireo ho toy ny vondrona matanjaka Madhesi ary mba hahazo tombondahiny amin'ny fanomezana asam-panjakana.
Voice of Tharus namoaka tsanganan-dahatsoratra iray amin'ny teny nepaley avy ao amin'ny Kishore Nepal, momba ny saritaka tao Tharu, tamin'ny filazàna hoe:
Ao anatin'ity vanimpotoana fiovàna ity, tsy afaka ny ho tafavoaka velona isika amin'ny maha-firenena, raha tsy vitantsika ny mandray ireo hevitra sy fomba fijery isankarazany ho ao anatin'ny mari-pamantarana iraisan'ny Nepaley. Mba hanaovana izany, tsy ilaintsika ny manana fototra kolontsaina iraisana, fa tsy maintsy miasa mametraka faritra mizaka tena izay ahafahan'ireo vondrona Tharus sy Madhesis, sy ny hafa miaina anaty fiombonana sy fahasamihafàna.
Toy ireo Tharus, ny Miozolmàna [angl] koa dia vondrona vitsy an'isa ao Nepal. Tamin'ny herinandro lasa, nidina an-dalambe ihany koa izy ireo mba hitaky ny sata maha-vondrompoko iray manokana azy, ary fanomezana tombondahiny azy amin'ny fahazoana asam-panjakana:
Androany, nanambana ny hanao fitokonana faobe ao an-drenivohitra ny vondrom-piarahamonina vitsy an'isa misy an'ireo miozolmàna ao Nepal raha toa ny governemanta tarihan'ireo Maoista ka mandà tsy hanaiky azy ireo ho toy ny vondrompoko manokana ao amin'ny lemak'i Terai.
Hampitombo ny fikorontanan'ny resaka foko ao amin'ny firenena, ho any amin'ny fitakiana ny zo politika sy toekarena bebe kokoa, ny fandrahonan'ireo Miozolmàna. Nambaran'ilay vondrom-piarahamonina fa mety hanao hetsipanoherana ry zareo amin'ny herinandro ho avy io hanoherany ny fanasokajiana apetraky ny governemanta ao anatin'ny lalàm-panorenana vaovao, izay mampiditra azy ireo ho ao anatin'ny lisitry ny vondrom-piarahamonina Madhes monina ao amin'ny lemak'i Terai, any amin'ny sisintany iraisana amin'i India.
Raha ny vaovao farany avy any Nepal, nifarana ny fifampiresahana teo amin'ny governemanta sy ireo mpitarika avy amin'ny miozolmàna, araka ny nambaran'ny gazety nepaley mpiseho isanandro Kantipur. Voalaza fa nahomby ny dinika, nanome toky ny governemanta fa hamaly ny fitakian-dry zareo, saingy mbola misy ireo pitsopitsony mila alamina. Nefa amin'izao fotoana izao, tsy misy zavatra mandeha mora izany ao Nepal. Ao anaty kihondalana hafahafa, anatin'ny fotoana izay nifaranan'ireo fifampiresahana, misy vondrona miozolmana nanao fanambaràna fa ilay tarika notarihan'ny Kaomity mitambatra ho an'ny tolona nasiônaly miozolmàna dia tsy nahasolo tena ilay vondrom-piarahamonia, ary takiany ny governemanta mba hanao ho laharam-pahamehana ny fijerena ny fitakian-dry zareo (napetraka tamin'ny 25 febroary 2009).